विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोही नेपालका सम्पदा हुन्। त्यस्तो सम्पदाको नेपाल सरकारले उचित संरक्षण गर्न नसक्दा अधिकाशं आरोही पलायन हुन बाध्य भएका छन्। सगरमाथामा धेरै किसिमका कीर्तिमान बनाएर नाम कहलिएका अधिकाशं आरोहीको गन्तब्य अमेरिका नै हुने गरेको छ।
कीर्तिमानी आरोहीको गन्तब्य सगरमाथा आरोहणपछि अमेरिका नै बन्ने गरेको छ। के गर्दछन् त त्यस्ता विश्व कीर्तिमानी आरोही अमेरिकामा? एक फिल्म निर्माताले केही सगरमाथा आरोहीको अमेरिकी जीवनलाई आधार बनाएर निर्माण गरेको डकुमेन्ट्री फिल्मले अहिले चर्चा पाइरहेका छ, न्युयोर्कमा।
अमेरिकी निर्माता एन्ड्रयू अक्रोमले निर्माण गरेको ‘शेर्पा स्ट्यु ’(एक प्रकारका शेर्पाका खानाको परिकार) नामक फिल्म आइतबार न्युयोर्कमा प्रदर्शन गरियो। यूएस नेपाल क्लाइम्बर्स एसोसियसनको आयोजनामा न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइटको शेर्पा केन्दूङ हलमा प्रदर्शन गरिएको उक्त डकुमेन्ट्री फिल्म हेर्न अधिकाशं दर्शकको आखाँ रसाएका थिए।
देशको परिस्थिति र पारिवारिक बाध्यताको कारण अमेरिका पलायन भएका कीर्तिमानी आरोहीको अमेरिकी जीवन पनि त्यति सहज छैन। सगरमाथाको सबैभन्दा कठिन दक्षिण भेगबाट आरोहण गरी कीर्तिमान राखेका कृपा शेर्पालगायत पात्रलाई आधार बनाइएर बनाइएको फिल्मले अमेरिकामा बसोवास गर्ने अधिकांश सगरमाथा आरोहीको जीवनलाई चित्रित गर्न खोजेको छ।
विश्वको ‘ड्रीमल्याण्ड’ अमेरिकामा आएर पनि कीर्तिमानी अरोहीको प्रारम्भिक जीवन सहज छ त ? के गर्दछन् आरोही अमेरिकामा? किन उनीहरु अमेरिका आउन बाध्य भए? अमेरिका आएपछि कीर्तिमानी आरोहीको परिवारिक जीवनको के कस्तो परिवर्तन आयो? यावत् विषय समेटे बास्तविक जीवनमा आधरित रही बनाइएको फिल्मले एक पटक जोकोही नेपालीलाई पनि भावुक बनाउछ।
नेपालको दुर्गम भेगबाट न्युयोर्क शहरको मनोरम दृश्य हेर्दा जति आनन्द आउछ त्यति सहज पनि छैन अमेरिकामा शेर्पाहरुका सधर्षका कथा। एउटा फरक सामाजिक र सास्कृतिक परिवेश, न्युयोर्कको साधुरो बसाई रेष्टुरेण्ट, स्टोर र ड्राइभिङको थकित काम, परिवारसंग छुट्टीएर बस्नुपर्दाको पिडालाई फिल्ममा चित्रण गरिएको छ। फिल्ममा अमेरिकामा सानो काम गरेर पनि आरोहीले कसरी परिवार, समाज र देशलिाई योगदान दिइरहेका छन् भन्ने विषयलाई पनि समेटिएको छ।
अमेरिकी निर्माताले बनाएको ८४ मिनेटको उक्त फिल्ममा सगरमाथा आरोहीले रेष्टुरेण्टमा गरेको कामको दृश्य र सडक दुर्घटनाको विषले धेरैलाई भावुक बनाउछ। फेरी सम्भावनाको देश अमेरिकामा सानो काम गरेर पनि पाउने पारिश्रमिक र पारिवारिक खुसीले फिल्मलाई रोमाञ्चक बनाएको छ। अमेरिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजुली, सडकलगाय सुविधाको कारण सामान्य रेष्टुरेण्ट र स्टोरमा काम गर्ने नेपालका आरोही खुसी नै रहेका छन् भन्ने विषयलाई एन्ड्रयूले रोमाञ्चक ढंगले फिल्ममा प्रस्तुत गरेका छन्।
निकै कठिक मानिएको सगरमाथाको दक्षिणी भेगबाट आरोही गरी कीर्तिमान बनाएका आरोही कृपा शेर्पाको न्युयोर्कमा सघर्षका कथानै फिल्मको मूल विषय हो। जसले समग्र आरोहीको प्रारम्भिक अमेरिकी जीवनीलाई प्रतिनिधित्व गर्न खोजेको छ।
६ पटक सगरमाथा आरोहण गरिसकेका यूएस नेपाल क्लाइम्बर्स एसोसियसनका अध्यक्ष पासाङ रिन्जी शेर्पा देशले आरोहीलाई उचित सम्मान गर्न नसक्दा आफुहरु विदेशिन बाध्य भएको बताउछन्।
नेपालका चर्चित र काम कहलिएका अरोहीको सम्मान र सरक्षणमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको कारण बाध्य भएर उनीहरु पलाएन भएको जनाउदै अध्यक्ष शेर्पा भन्दछन्, 'कीर्तिमान आराही मात्र हैन कहलिएका कलाकार र पत्रकार अमेरिकामानै छन्। उनीहरुको कथा पनि यस्तै छ।'
हिमपहिरोमा ज्यान गुमाएका शेर्पाका परिवारलाई समेत सरकारले उचित गास, बास र कपासको ब्यबस्था गर्न नसकेको जनाउदै अध्यक्ष शेर्पाले धेरै परिस्थिति र बाध्यताले पलायन हुने गरेको बताउछन्।
‘सरकारले गर्न सकेका छैनौ। तर, एक अमेरिकी नागरिक जसले नेपालको दुर्गम भेगमा आरोहीको सम्मानमा पुल निर्माण गर्ने उदेश्यले फिल्मनै बनाए‘, शेर्पाले भने। अमेरिकामा आएका आरोहीको हक, हित र अधिकारका लागि पनि यूएस नेपाल क्लाइम्बर्स एसोसियनले काम गर्दै आएको शेर्पाले जनाए।
यूएस नेपाल क्लाइम्र्स एसोसियसनका उपाध्यक्ष पेमा छेवाङ शेर्पा रहरले नभइ धेरै आरोहीहरु बाध्यताले विदेश बस्नु परेका जनाउछन्। सरकारले आरोहीको संरक्षणमा ध्यान दिन नसके भविष्यमा नेपालमाको पर्यटन क्षेत्रमानै ठूलो धक्का लाग्ने उपाध्यक्ष शेर्पा भन्दछन्।
तीन पटक सगरमाथा आरोहण गरी हाल न्युयोर्कमा बसोवास गरिरहेका युवा आरोही ल्हाक्पा गेलु शेर्पा नेपाल सरकारले आरोहीलाई उचित राहत, सहुलिएत दिई रोजगारको सुनिश्चिता गरेमा आफूहरु विदेश पलाएन नभई स्वदेशमा नै हिमाली क्षेत्रमा योगदान दिने बताउछन्।
देशको पर्यटन र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन आरोहीको योगदान महत्वपूर्ण हुने जनाउदै आरोही ल्हाक्पा गेलु भन्दछन्, 'देशको अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा सुधार ल्याई पर्वतारोहीहरुको सरकारले उचित संरक्षण गरेमा उनीहरु विदेश पलाएन नहुने विश्वास प्रकट गर्दछन्।'
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र २१, २०७३ २३:२०:१८